တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး H.E. Mr. Zhang Guohua ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက် (နေပြည်တော်)သို့ လာရောက်လေ့လာ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်) – Myanma Gems Enterprise
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး H.E. Mr. Zhang Guohua ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက် (နေပြည်တော်)သို့ လာရောက်လေ့လာ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်)